Dowladda: nidaamka karensdag isbaddel ayaa lagu sameeyn doono - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiradda caymiska bulshada Annika Strandhäll. sawir: Maja Suslin/TT
Annika Strandhäll: karensdag maanta cadaalad ma ahan
La daabacay torsdag 11 maj 2017 kl 15.47
Xukumadda iyo xisbiga taageera ee Vänsterpartiet ayaa maalinta karensdag doonaya in lagu baddelo wax ay ugu yeereen karensavdrag. Ujeedada ayaa ah in tusaale dadka shaqeeya saacadaha dheer markay jirradaan in aan laga jarin qarash ka badan kan laga jaro dadka saacadaha caadiga ah shaqeeya.
– Maalinta karensdag runtii waa mid cadaalad daro ku ah dadka shaqeeya saacdaha dheer iyo waqtiyada aan caadiga aheyn. Kuwaas oo badanaa ah haweenka ka shaqeeya daryeelka iyo caafimaadka, kooxdan waa kuwa u baahan in ay helaan cadaalad iyo sharuudo wanaagsan ayey tiri, wasiiradda caymiska bulshada Annika Strandhäll (S).
Qofka shaqeeya saacado yar bishii madaama ay shaqadiisu tahay tusaale mid habeen xilliga dembe la shaqeeyo ayaa maanta laga jaraa kharash ka weyn mushaarkiisa marka loo barbardhigo qof shaqeeya saacdaha caadiga ah. Waana middan waxay dowladdu dooneyso in ay wax ka baddesho. Xukumadda ayaa arrintan qoral ku soo saartay qoralkas oo loo gudbiyey ka soo talo baxin.
Waxay xukumadda iyo Vänsterpartiet doonayaan in qofka maalinka koobaad ee jirrada shaqada uga maqan yahay in laga jaro shan meelood meel isku geyn mushaarkiisa todobaadka. Taas waxay keeneysaa in kharashka laga jaro dadka xilliyada aan habooneyn shaqeeya iyo saacadaha dheer in uusan ka badan kharashka kuwa shaqeeya saacdaha caadiga ah.
Xisbiyadda mucaaradka ee midigta u janjeera, sida Moderaterna ayaa taageersan hindisahan maadaama u arkaan mid ku salaysan cadaalad fal, middas oo suurtogal ka dhigeysa in hindisaha uu baarlamaanka meel mariyo. Laakiin xukumadda ayaa dooneyn inay arrintan hirgeliso ka hor kowda janaayo 2019 maadaame garabyada suuqa shaqada ka xaajoonayaan farsamadii isbaddelkan looga hirgelin lahaa suuqa shaqada.
– Garabyada suuqa shaqadu waxay fiirinayaan sida ugu haboon ee looga hirgelinayo xirfadaha kala duwan ee suuqa shaqada, ayay tiri Annika Strandhäll.
Sida ay wasiiradda caymiska bulshada sheegtay isbaddelkani kama micno noqon doono in qaabka cusub ee loo xisaabin doono kharashaka mushaar qaataha laga jaro maalinka koobaad ee jirrada mid negetivt ku noqda dadka saacadaha caadiga ah shaqeeya.
– Waxaan filaynaa in dadka caadiga maanta u shaqeeya aysan waxba ka baddeli doonin kharashka laga gooyo maalinta koobaad ee ay shaqada jirro uga maqan yahiin, ayey Annika Strandhäll.